Uyifaka njani imifanekiso yasekhaya kuGoogle Earth-Geofumadas
Ukuphendula imibuzo eza kum, ndithatha ithuba lokushiya iziphumo ukuze zisetyenziswe luluntu.
Ngexesha elidlulileyo bendithethile Imifanekiso ingafakelwa njani idityaniswe nenqaku kuGoogle Earth, nangona usebenzisa iidilesi zewebhu. Kule meko ndifuna ukuyibonisa ndisebenzisa umendo wasekhaya:
Ukuba ufuna ukwenza enye into, njengokubeka imifanekiso eliqela, ngobukhulu, nangobunye ubungakanani, ungasebenzisa ikhowudi enkulu njenge
<img src=»file:///C:/images/topo1.jpg»Ububanzi = 500 HEight = 400 BORDER = 8/>
<img src=»file:///C:/images/luna.jpg»Ububanzi = 500 HEight = 400 BORDER = 8 />
<img src=»file:///C:/images/shema.jpg»Ububanzi = 500 HEight = 400 BORDER = 8 />
Ukuba ufuna ukubeka itafile, ungasebenzisa ezinye iinkcukacha, umbala ongasemva, njl. Kungenziwa nge-Dreamweaver okanye ngomnye umhleli we-html emva koko ukope ikhowudi. Umzekelo ndishiya enye:
Imenyu Umbhalo 1 Umbhalo 2 Umbhalo 3t
Kwaye oku kunokuba sisiphumo:
Ngokucacileyo iGoogle Earth ayizixhasi zonke i-html okanye iithegi zeJavacript, kodwa anele anokwenziwa.
Post edlulileyo«Ngaphambilini iindaba WordPress 3.3 Mfana
Post Next Iinkqubo ezili-13 ze-GIS onokungazi ngazoOkulandelayo »
I-6 iphendula "Uyifaka njani imifanekiso yangaphakathi kwiGoogle Earth"
UNahum Hdz uthi:
Kukho ukhetho lokuba ifayile ye-KML ifumana iifoto zesikhombisi apho i-KML igcinwe khona, kwaye nokuba isusiwe kulawulo, idluliselwa kwi-USB okanye kwi-CD, zombini i-KML kunye neefoto, akukho ngxaki?
Inomdla kakhulu yonke le ngcaciso, sele ndikwazile ukubeka iifoto kwi-KML yam ukusuka kwi-hard drive yam, kodwa kufuneka ndihambise iifoto kunye ne-KML kwi-CD kumxhasi, kwaye njengoko ezinye iiPC ziya kuyazi, inesikhombisi se-CD njengo-D: \_ kunye nabanye abafana ne-E: \_ okanye F: \_, uyazi kuxhomekeke kwinani lokuqhuba kanzima onalo, izahlulelo, njl njl.
Ndingayichaza njani ifayile yam ye-KML ukuba iifoto ziya kuhlala zikulawulo olusebenzayo ngoku, oko kukuthi, ukutsala iifoto kulawulo lwangoku apho i-KML igcinwe khona.
Ndenze olu khetho e-Excel, apho ndabona khona iindlela ezimbini, enye apho kusetyenziswa khona ii-macros apho ulawulo olusebenzayo lwenziwe khona (oko kukuthi, apho ifayile osebenza kuyo igcinwa khona) kwaye enye isebenzisa iifomula apho kuqala Isikhokelo esisebenzayo siyakhutshwa kwaye sigqitywe kunye neminye imisebenzi kunye neefomula.
Kukho kwinkqubo ye KML ukhetho apho ndikuxelela ukuba ndifuna ukuba ukhuphe ifoto kulawulo lwangoku olusebenzayo, oko kukuthi, naphi na apho ifayile ehlala ikhangela kulawulo olulodwa igciniweyo, okanye ngamaphupha am kuphela ?
Ndizamile ukubeka imifanekiso njengoko usitsho kumzekelo, kodwa ndifumana kuphela indawo engenanto, ndikopele iifoto kwifolda efanayo apho ibikhona kmz kwaye ihlala injalo, ndicela undincede.
Enkosi ngeekhowudi zakho zokungena kwimifanekiso kuGoogle, ikhowudi enelinki ye-http iyasebenza kodwa le khowudi ayinditsaleli umfanekiso awunanto.
UJOSE MEDINA uthi:
Umfanekiso kunye nefayile ye-KMZ kufuneka ukuba ikwincwadi efanayo. Iiluncedo xa zifuna ukuhambisa iifayile ukusuka kwenye i-PC iye kwenye.
Umhleli wemibuliso ebulela ngoncedo, ndiyathemba ukuba inkxalabo zam ziyakhonza kwaye ndinceda abantu abaninzi bakubone kungekudala ngemibuzo emininzi